Digniinaha Xariiqda 'Metrobus Line'! | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulQaylodhaanta Xariiqda mitrooga!
Qaylodhaanta Xariiqda mitrooga!
18 / 10 / 2019 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
khadka metrobus wuxuu bixiyaa qaylo dhaan
Cufnaanta xargaha metrobus, nolosha gaadiid ee Istanbul, waxaa loo wareejiyay ajendaha Golaha Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul. Kordhinta tirada rakaabka isticmaalaya joogsiga Altunizade ayaa la buuxiyay.
SözcüSida lagu sheegay warbixinta Ozlem Guvemli'nin; Khadka tareenka ee metroobus oo wata malaayiin rakaab ah oo u dhexeeya labada qaaradood ee Istanbul ayaa soo jiidanaya dareenka IMM Assembly GOOD Party Group SözcüXubin ka ah Guddiga Gaadiidka iyo Gaadiidka. Suat Sari, khudbadiisa oo ah ajandaha; xitaa metrobus 545, oo muujineysa in tikniyoolajiyadda iyo nolosha nololeed ee gawaarida ku guuldareysata inay xoogga saaraan guuldarada joogtada ah.
27 PHILEAS ROTES EE WAREHOUSE
Khadka Metrobus ee loogu talagalay 1.2 milyan euro oo iyaga ka mid ah oo leh awoodda 258 rakaab Phileas oo ah nooca gawaarida calaamadda leh, oo muujinaya da'da 12. Jaale, 50 metrobus 27'nin ciladaha farsamo ee Bakhaarada, ayaa yidhi. Marka loo eego natiijooyinka Sar of, 165 awoodda rakaabka ee 400 kun oo nooca gawaarida calaamadda casriga ah waxay gaareen da'da 12, mid ka mid ah 400 kun oo Euro gaadiidka gawaarida calaamadda leh ayaa waday rakaab muddo sannado ah 7.
MAAMULI KARO IN LAGU SAMEEYO
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in gawaarida aan la ilaalin karin xilli xilli ah sababtoo ah gaadiidka rakaabka ee joogtada ah. Suat Sari, sababaha ugu badan ee shilalka ee muddadii u dambeysay ayaa lagu taxay sida soo socota:
- Darawalada baabuurta yar iyo gawaarida. Darawalada badankood waxay shaqeeyaan saacadaha 10.5 maalintii. Dagaalada sababay culeyska xad dhaafka ah ee rakaabka ayaa sidoo kale si xun u saameeya wadayaasha. Darawalada ayaa ah kuwa cilmi nafsi qaba. Dhammaantood waxay u baahan yihiin inay dhaqan-celiyaan takhaatiirta cilmu-nafsiga wadooyinka.
- Tiro aad u yar oo darawalada BRT ah. 100-200 wuxuu u baahan yahay in lagu daro darawalka cusub. Gawaaridu sidoo kale waa dhibaato. Taayirada Metrobus waxaa ka buuxa taayirro. Basaska gaadhay dhamaadka noloshooda dhaqaale waxay daadinayaan saliida ciladaha dayactirka. Ku daadinta saliida wadada waa sababta ugu weyn ee shilalka. Dusha sare ee wadadu way jabtay. Warbixinta shilka khabiirka ayaa tilmaamaysa dhibaato wadada 15 ah.
Goobaha loo baahan yahay
Dr. Jaale, khadka metrobus adoo taabanaya tillaabooyinka lagu qaadayo wadada tareenka, joogsiyo dhexe ee safarada giraanta Marmaray si loo habeeyo, ayaa yiri waa in gawaarida cusub ee metrobus la qaado.
MACLUUMAADKA PASSENGER EE ALTUNİZADE
Kooxda CHP SözcüSu Tariq Balyal wuxuu kaloo siiyay tirooyin xiiso leh isagoo sharraxaya maaddada:
- Waxaa jira korodh rakaab ah oo ah 2018 qadka metrooga marka loo eego 2019 iyo 4. Xaalad gaar ah ayaa jirta Altunizade. 2018 ee 2019 iyo 9 waxay la kulantay koror rakaab ah oo ah boqolleyda 37,4 bishii. Waxaan wajaheynaa koror aan caadi aheyn.
- Waxaa jiray koror ah 66.4 bishii Luulyo, 45.7 ee Agoosto iyo 40.9 bishii Sebtember. 2018 milyan 9 kun oo rakaab ah ayaa adeegsaday xaruntan bishii ugu horreysay ee 5 ee 533, halka 2019 milyan 7 kun oo rakaab ah ay adeegsadeen xarunta sagaalkii bilood ee ugu horreeyay ee 557. Kordhin boqolkiiba saxda ah ee 37,4.
- Marka la qorsheynayo tareenka dhulka hoostiisa mara ee 'Çekmeköy-Sancaktepe', ma jiro wax qorshe ah oo ku saleysan saldhigga Altunizade, sidaa darteed cufnaanta xad dhaafka ah ayaa dhacda.
Istanbul waxay taageertaa tartanka gaasta dhirta gaaska dabiiciga ah
ERC GmbH, Great Rail Freight Turkiga ...
New Trams Trams Oo Ku Baxaya Magaalada Moscow
Israa’iil, Donald illaa Saldhigga Tareenka Darbiga
CHP Izmir Kuxigeenka Balbay Dowlada ka socota Izmir 10…
Estram waxa uu daryeelaa nadaafadda
Mashruucyada xooga saaraya Sayniska iyo Tiknoolajiyada
Masaafada Magaalada Ankara ee Caarada
Haweenka Waaweyn ee Baska waxay siiyaan Trust
Sakarya Codsiga Baaskiilka ee Smart 15 wuxuu ku jiraa Qodobo Kala Duwan…
Istiraatiijiyadda Magaalada Istambul iyo Xargaha Tareenka Magaalada
Xarunta tareenka dhulka hoostiisa mara ee Çekmeköy Sancaktepe
Gawaarida Astaamaha Awoodda
line line metrobus
Tirada gawaarida 'Metrobus'
Taayirada loo yaqaan 'metrobuse'
Khadka Kayaş-Sincan Başkentray Wuxuu Kordhiyey 18.4 Km
Goorma la furi doonaa Saldhigga tareenka ee Derbent?